Filtrer les éléments par date : jeudi, 08 juillet 2021
jeudi, 08 juillet 2021 19:13
Kipahy : Vahaolana mahomby hampitomboana ny famokarana
Hahatrarana ny fahavitan-tena ara-tsakafo dia ilaina ny manitatra ny velaran-tany vaovao ho volena. Ny kipahy dia fomba fanajariana ny tehezam-bohatra ho lasa tanimbary mifanao ambaratonga.
Tsy zoviana amin’ny rehetra fa ny tavy dia manimba ny tontolo iainana, ary amin’izao fiovaovan’ny toetrandro izao sy ny aretina isan-karazany, dia tsy mahazo 50% ny vokatra tokony ho azony akory ny tantsaha. Noho izany, vahaolana ny kipahy, ampiana zezika mineraly sy teknika famerenana ny tsiron’ny tany.
Manatsara ny voka-bary satria mihazona hamandoana ary mamorona loharano ny kipahy. Mikajy ny tontolo iainana ihany koa satria misakana ny hamafin’ny ranoriaka tsy hikaoka ny nofontany.
Azo atao ny mamboly vary in-droa : vary an-tanety rehefa maintany, ary vary an-drano rehefa fahavaratra. Ary tsy ahiana ho matin’ny tondra-drano ny voly satria avo toerana.
Asa goavana ny mamolaka tanety satria tsy vita amin’ny asa angady na lapika fa ampiasaina fitaovana maoderina toy ny traktera sy teknika fanaovana tsipy miraabo (courbe de niveau).
jeudi, 08 juillet 2021 19:12
Zaridainan'Antaninarenina : Raikitra ny Tsenaben'ny fizahantany andiany faha-3
Notanterahina nanomboka androany alakamisy 8 jolay teny amin’ny Zaridainan'Antaninarenina – Antananarivo ny Tsenaben'ny Fizahantany.
Andiany fahatelo ny hetsika, izay karakarain'ny ministeran'ny Fitaterana, ny Fizahantany ary ny Famantarana ny toetry ny andro, miaraka amin'ny Ofisim-pirenena momba ny fizahantany (ONTM), ary haharitra hatramin'ny sabotsy 10 jolay ho avy izao.
Natao indrindra hanohanana sy hampiroboroboana ny fizahantany anatiny, ary tafiditra ao anatin'ny paikady vaovao napetraky ny ministera nanomboka ny taona 2020 ny Tsenaben'ny fizahantany.
Miantefa mivantana amin’ny rehetra, izay mpizahatany anatiny, avy eto an-toerana arak'izany ireo tolotra samihafa hampahafantarin'ireo mpandraharaha mpandray anjara rehetra, indrindra amin'izao ankatoky ny fialan-tsasatra lehibe izao.
Natokana ho an'ireo mpianatra ny zoma 09 jolay amin'ny 09 ora ka hatramin’ny 10 ora maraina.
jeudi, 08 juillet 2021 11:36
Fikasana hamono ny jeneraly SEG : Olona folo naiditra am-ponja
Lehilahy miisa enina (06) nikotrika sy nanomboka hanatanteraka famonoana ny Jeneraly Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, Richard Ravalomanana, no voasambotry ny Sampana misahana ny fikarohana heloka bevava eo anivon'ny Zandarimariam-pirenena eny Fiadanana eto Antananarivo.
Ny roa amin'izy ireo dia mpiambina akaiky ny Filoham-pirenena teo aloha, ka zandary amperin'asa ny iray ary sivily ny iray. Naiditra eny Tsiafahy avokoa izy 6 mirahalahy rahefa natolotra ny fampanoavana Anosy.
RN2 : Tra-tehaka ny voamboana miisa 109
Hazo voamboana miisa 109 no tra-tehaky ny ekipan’ny fisafoana eny anivon’ny minisiteran’ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy teny amin’ny lalam-pirenena faha-2 ny alahady lasa teo.
Fiarabe iray no nitondra azy ireo, ary dia nogiazana avy hatrany ny fiarabe miaraka amin’ny hazo.
Nisokatra avy hatrany ny fanadihadiana mikasika io raharaha io.
Heverina ho avy any Alaotra-Mangoro no nihavian’ireo hazo sarobidy ireo.
Nanomboka ny novambra 2020 dia voarara tanteraka ny fikapana sy ny fitrandrahana ary ny fitaterana hazo ala, ary indrindra ny hazo sarobidy maneran’i Madagasikara.
jeudi, 08 juillet 2021 08:10
Tsarazaza - Fandriana : Vahoaka an’arivony tonga mitrandraka volamena
⁠Misy karieram-bolamena vaky ao Antsahalava, Fokontany Sahatorendrika Kaominina Tsarazaza, Distrika Fandriana Faritra Amoron’i Mania.
⁠Olona an’arivony avy amin'ny lafivalon’ny Nosy no tonga mitrandraka volamena any an-toerana hatramin'ny volana jiona lasa teo.
⁠Voalaza anefa fa tsy ara-dalàna ity asa fitrandrahana ity ary tsy manana fahazoan-dalana na koa taratasy maha mpitrandraka ireo olona ao ireo.
⁠Nisy solontenam-panjakana nidinana ifotony nanao fanentanana ireo vahoaka hiditra amin'ny sehatry ny fitrandrahana ara-dalàna sy hitsinjovana ny filaminam-bahoaka.
⁠Ankehitriny moa dia mbola nakaton'ny fanjakana ny fanondranana volamena any ivelany, na dia mahatratra 5 tapitrisa aza ny Malagasy misehatra amin'io asa io, ary mbola maro ireo mpandraharaha malagasy nogadraina sy mbola enjehina any anaty ala rehetra any amin'izao.
Haiti : Maty nisy namono ny filoha Jovenel Moïse
Lavo teo amin’ny faha-53 taonany i Jovenel Moïse, filohan’i Haiti. Notafihina andian’olona mpanao vy very aina tao an-tranony izy ny alin'ny talata hifoha ny alarobia 07 jolay, ary maty voatifitra. Naratra mafy tamin’izany ihany koa ny vadiny.Mpandraharaha i Jovenel Moïse.
Nanomboka ny 7 febroary 2017 no nitondra an’i Haiti.
Firenena isany mahantra any Karaiba i Haiti.
jeudi, 08 juillet 2021 07:45